कांग्रेस नेता पौडेललाई पुल उद्घाटन गर्न नेकपाको अवरोध, दमौलीमा निषेधाज्ञा ( प्रशासनको बिज्ञप्ति सहित) Global TV Nepal
कांग्रेस नेता पौडेललाई पुल उद्घाटन गर्न नेकपाको अवरोध, दमौलीमा निषेधाज्ञा ( प्रशासनको बिज्ञप्ति सहित)
मण्डलेतन्त्र फेरि आएजस्तो भयो : पौडेल
ग्लोवल टि.भी. बुधबार, मंसिर १७, २०७७ 0
तनहु्ँ । पुल उद्घाटन गर्ने बिषयमा विवाद हुँदा जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले दमौलीमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर न्यौपाले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपूर्व दमौलीमा नेकपा तनहुँ र राष्ट्रिय युवा संघले विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए । व्यास नगरपालिकामा मोटरेबल पूल निर्माण भएको र त्यसको उद्घाटन कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्ने भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
नेकपाले कांग्रेसका नेतालाई पुल उद्घाटन गर्न नदिने भन्दै प्रदर्शन ग¥यो । नेकपा तनहुँका अध्यक्ष केदार सिग्देलले कांग्रेसले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको जनाएका छन । नेकपाको प्रदर्शनपछि प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।
यता, कांग्रेसले भने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नरोकिने जनाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय प्रशासनले फट्याईँ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले आफू पुल उद्घाटन कार्यक्रमस्थलतर्फ हिँडेको र आफूले कुनै झुटमुठको विज्ञप्ति नमान्ने बताएका छन ।
उनले भने, “स्थगित गर्ने र नगर्ने कुनै कारण र औचित्य नै छैन । यो पञ्चायतको मण्डलेतन्त्र फेरि फर्केर आएको देखिन्छ । हिजो हामीलाई रुख रोप्न लाग्दा पनि हामीलाई पिट्ने मान्छे आज तीनै हुन । आज पुल उद्घाटन गर्दा कुन शान्ति भंग हुन्छ, कुन विकास रोकिन्छ, कुन जनतलाई पीडा हुन्छ ? कुन देशलाई नोक्सान हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे, “हामी पुलको उद्घाटन गर्छौैँ । यो सबै झुटा हो, तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु भनेजस्तो हो । यो सबै नाटक रचिएको हो । केही मान्छेलाई मोटरसाइकल कुदाउन लगाएर प्रशासनले बेइमानी गर्दैछ । झुटमुठको विज्ञप्ति मान्दिन म । यो फट्याईँ हो ।”
१८ लाख नगद सहित पोखराबाट ६ जना जुवाडे पक्राउ
अध्यादेशको बिरोधमा अनेरास्ववियुबाट मसाल जुलुस
नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खातीको सपथ सर्वाेच्चमा